Semalt Expert avy any Islamabad - Inona avy ireo mpitsikilo sy robots?
Ireo spider mpikaroka dia fantatra koa amin'ny hoe mpitsikilo sy bots. Ireo dia fandaharanasa madinidinika sy maoderina izay ampiasain'ny fikarohana mba hivoatra hatrany amin'ny votoatin'ny tranonkala manerantany. Mitady mandrakariva ireo pejy vaovao vaovao sy vao haingana ireo mpitaingin-tsoavaly. Michael Brown, mpitantana ny Success Successor Semalt , dia manome toky fa ny pejy valin'ny fikarohana dia tsara toy ny tahirin-tsarimihetsika.
Inona avy ireo Spiders, Robots, ary Web Crawlers?
Ahoana ny fiasan'ny milina fikarohana?
Raha te hahalala ny fomba fiasan'ny milina fikarohana ianao, dia tokony hieritreritra azy ireo ho toy ny robot finday. Efa niteny taminareo izahay fa mandeha any amin'ny aterineto ireo spiders mba hahita rohy vaovao sy tranonkala vaovao. Rehefa manolotra ny votoatinao amin'ny milina fikarohana ianao, dia ampidirina amin'ny lisitry ny spiders, ary hitsidika ny votoatinao izy ireo hanamafy ny kalitaony. Ny pejy web-nao dia ho hita na dia tsy manaiky azy aza ianao satria ny spiders dia afaka mahita ny pejy mifandray amin'ny tranonkala hafa. Tsy isalasalana fa manatanteraka asa maro samihafa izy ireo, ary ilaina ny manangana tranomboky rohy amin'ireo tranonkala malaza any amin'ny tranokalanao.
Impiry ny fitsidihan'ireo robots sy spiders ny pejy Internet anao?
Ny fitaovam-pikarohana rehetra dia manana ny tahiry manokana, noho izany, ny fahamaroan'ny fitsidihana dia miovaova amin'ny milina fikarohana iray mankany amin'ny iray hafa. Ny fampivoarana goavana ny tranokala tsy manam-paharoa sy vaovao sy ny blaogy dia nahavaky tanteraka ny dingana, saingy tsy tokony hanahy ianao satria ny mpitaingin-tsoavaly fikarohana dia ny drôna tsy misy dikany amin'ny iraka ataony. Hahita ny tranokalanao sy ny votoatiny avy amin'ny rohy na ny rohy mankany amin'ny tranonkala hafa izy ireo. Raha vao tafiditra ao amin'ny tranokalam-pandaharam-potoana ny tranonkalanao dia hitsidika azy hatrany ny robots sy ny sponjy mba hijerena raha toa ka tsy misy vaovao ny votoatiny. Ny mpikarakara webmasters rehetra sy ireo mpitoraka blaogy dia tokony hahafantatra hoe iza amin'ireo pejin-tranonkala no notsidihan'ny mpitsikilo fikarohana. Noho izany dia tokony hanamarina ny tatitra momba ny tolotra rakitra ao amin'ny kaonty Google Analytics ianao Source .